❤️ साथ, बाट: आमा, चारु, आमा, Haj, हजुरमुमा
Samhita Collur मा मे 5, 2017 द्वारा लिखित।
एउटा फस्टाउँदो चोकोबाना व्यवसायबाट किस्चीको मसालेदार चुटकी सम्म शाब्दिक अर्थ "म तिमीलाई माया गर्छु।"
MAF मा, हामी सँधै कथाहरू साझेदारी गर्न एउटा बहाना खोज्दछौं। मामा दिवस २०१ of को उत्सवमा, केहि एमएएफ स्टाफ सदस्यहरू र Lending Circles ग्राहकहरूले हामीलाई उनीहरूको आमा, हजुरआमा र छनौट आमाहरूका बारे बताएका थिए - र तिनीहरूलाई के विशेष बनाउँछ।
उनी मेरो लागि लचिलोपनको प्रेरणादायक उदाहरण हुन्।
चारु, उर्फ "आमा" (शिकागो, IL)
खैर, उनी पनी मलाई थाहा भएको सबैभन्दा उज्ज्वल महिला हुन् भन्ने तथ्यलाई पन्छाएर, उनी हाँसउठ्ठी छिन् — विशेष गरी जब उनी भावनामा थिए #nofilter। उनीसँग सबै भन्दा राम्रो कमेन्टरी छ जब हामी सँगै बलिउड चलचित्रहरू हेरिरहेका छौं।
म उनको रचनात्मकता र उनको ड्राइभको पनि प्रशंसा गर्दछु कि नयाँ चीजहरू सिक्न र प्रयास गर्न। मेरी आमा हुनुको साथै, उनले शिकागो वरपर ट्रन्क शो र शिल्प मेलाहरूमा हातैले बनाएको गहना बेच्छे, र उनी भारतीय भारतीय शास्त्रीय संगीत गाएर परिवारलाई सिकाउँछिन्, प्रदर्शन गर्छिन्, र आनन्दित छिन्!
$$ पाठ: उनले मलाई वित्तीय स्वतन्त्रताको महत्त्व सिकाए। नतिजाको रूपमा, मैले बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गर्न, लगातार बचत गर्ने, र मेरो debtsण जिम्मेदारीपूर्वक प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरेको छु।
- सामिता, पार्टनर सफलता प्रबन्धक
मैले १० बर्ष अघि मेरी आमा गुमाएँ र रेना थालीमा पुगे।
Reyna, उर्फ "मामा" (सान फ्रान्सिस्को, CA)
रेना मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीकी आमा हुन्, तर मैले उनलाई भेटेको क्षणदेखि नै मैले उनलाई अत्यन्तै मायाको अनुभव गरें। उनी हर्षोल्लास, मेहनती हुन्, र 52२ वर्षको उमेरमा उनीसँग ड्राइभ छ जुन बिरलै संगै राख्न सक्छ! उनले मलाई भनिन्, "जे भए पनि तपाईलाई के चाहिएको छ, म यहाँ छु।" उनले त्यो र अधिक गरिन्।
$$ पाठ: कहिले हार नमानु। रेयान २ an बर्ष अघि यो देशमा आउने आप्रवासीको रूपमा स strugg्घर्ष गर्दै थियो। म त्यस्तै इमिग्रेशन लडाईहरू मार्फत गए, तर उनको निर्देशन र प्रारम्भिक शुरुआत र उनको शर्त प्रेम र समर्थनका लागि धन्यवाद, म दृढ रहन सक्षम भएँ। उनले मलाई परम्परागत ndingण सर्कलको बारेमा पनि बताइन् (मैले MAF पत्ता लगाउनु भन्दा धेरै अघि) उनी भागमा थिइन्, र उनले मलाई सामेल हुन प्रोत्साहित गरिन्। यसले मलाई मेरो खर्चको प्रक्रियामा आउने सबै लागतहरूको लागि पैसा बचत गर्न मद्दत गर्‍यो।
- श्वेता, Lending Circles ग्राहक, सदस्य सल्लाहकार काउन्सिल
उनी मलाई भन्दा धेरै निःस्वार्थ व्यक्ति हुन्।
इरेन, उर्फ "आमा" वा "Reeny" (ल Island्ग टापु, NY)
उनी गहिरो र स्वाभाविक उदार व्यक्ति हुन्। म सँधै मजाक गर्दछु कि ऊ कहिल्यै डिनरमा बस्दैन किनभने उनी पक्का गर्दैछिन् कि सबैजनालाई आफुले चाहिएको चीज छ। उनले मलाई हास्य र चाँदीको अस्तर खोज्न सिकाउँछिन् जब चीजहरू योजनाको रूपमा हुँदैनन्। यो विशेष रूपमा प्रासंगिक थियो जब हामी मेरो विवाहको योजना बनाउँदै थियौं!
$$ पाठ: उनको आफ्नै आमा उहाँ १ was वर्षको उमेरमा बित्नुभयो, त्यसैले मेरी आमाले भविष्यको लागि कसरी बचत गर्ने, बुद्धिमानीपूर्वक खर्च गर्ने र एक डलर तनाव कसरी गर्ने भनेर सिक्नु पर्‍यो। उसले मलाई प्रारम्भिक उमेरदेखि नै खर्चको बारेमा इमानदार हुनको मूल्य प्रदान गर्‍यो। कहिले काँही यो केहि को लागी थोरै अतिरिक्त तिर्नु लायक छ यदि तपाइँ लामो समयको लागी राख्नु हुन्छ भने। छोटो अवधिमा सस्तो चीजहरूको प्रलोभनमा नपर्नुहोस् — जुन प्रायः पैसा खर्च हो।
– ALYSSA, पार्टनर सफलता प्रबन्धक
उनी सँधै मेहनती र भरोसायोग्य छिन्। अब उनीसँग क्रेडिट स्कोर छ यो प्रमाणित गर्न।
सेलिआ (सान फ्रान्सिस्को, CA)
ओह, मेरी आमा एकदम विशेष हुनुहुन्छ! उनी मेरो प्रेरणा हुन्, मेरो रोल मोडेल। उनी आनन्दमय र साहसी छिन्। जे भए पनि त्यसले जीवनमा जुन अवरोध खडा गर्छ, उनको अनुहारमा मुस्कान साथ निडर छ।
$$ पाठ: उनी एक प्राकृतिक नेता हुन्, र व्यक्तिहरू उनीसँग सल्लाह लिन आउँछन्। मानिसहरु उनीहरुका पैसाको समस्याहरु लिएर आउँथे। उनले आफ्नो समुदायमा धेरै ndingण सर्कलहरू सिर्जना गर्छिन् जसले मानिसहरूलाई पोखरीमा पुग्न सहयोग पुर्‍याउँछन् र बचतहरू निर्माण गर्न। जे होस् मेरी आमा जहिले पनि समर्पित बचतकर्ता हुन्, उहाँसँग क्रेडिट ईतिहास स्थापना गर्ने अवसर थिएन। म उनलाई एमएएफमा परिचय गराउन रोमाञ्चित भएँ। केहि MAF को Lending Circles मा भाग पाए पछि, उनी आफैंको लागि एक सुन्दर क्रेडिट स्कोर निर्माण गरीन्!
– पेट्रिशिया, Lending Circles ग्राहक, सदस्य सल्लाहकार काउन्सिल
उनी एक सेनानी हुन्।
अना, उर्फ "mami" (सैन फ्रांसिस्को, CA)
मेरी आमा? उनले आफैंमा तीन जना केटीहरू हुर्काइन्। उनले टेबुलमा खाना राख्न र हाम्रो टाउकोमा छानामा ठूलो अवरोध पार गरे।
$$ पाठ: जब म करीव दस बर्षको थिएँ, हामी एल सल्भाडोरबाट अमेरिका बसाउनु भन्दा पहिले, मेरी आमाले मेरी बहिनी र मलाई थोरै व्यवसाय गर्न मद्दत गर्नुभयो जुन हामी घर छाडेका थियौं। हामीले दुई भिन्न सेवाहरू प्रदान गर्‍यौं: फोटोकपी (हामी एउटा प्रिन्टरमा लगानी गर्छौं) र चकलेटले ढाकिएको केरा (आधिकारिक नाम: चोकोबानास)। हामीले विज्ञापन मात्र गर्नुपर्दैन - मान्छे मात्र थाहा थियो हामीसँग उनीहरूको प्रिन्टि and र चकोबाना आवश्यकताको लागि आउन। र हामीले यस उद्यमशीलताबाट केहि मूल्यवान पाठहरू सिक्यौं, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा: १) कडा परिश्रम गर्नुहोस्; २) तपाइँको सूची मा सबै chocobananas न खाने को लागी कोशिश गर्नुहोस्। ती पाठहरू आजसम्म मलाई मार्गनिर्देशन गर्न जारी राख्छन्।
– कार्ला, ग्राहक सफलता प्रबन्धक
उनी मेडिकल स्कूलमा भाग लिने भारतको उडिसा राज्यको पहिलो महिला हुन्।
सैराट, उर्फ "मामा" (ओडिशा, भारत)
मेरो हजुरआमाको बारेमा म धेरै प्रशंसनीय छु: उनको महत्वाकांक्षा, बौद्धिकता, उत्कटता, र हास्य, केवल केहि नामको लागि। र उनले मलाई जीवनभरि धेरै उपहार दिएकी छिन्। मेरो हजुरआमा मेरो योगी हुनुहुन्छ। यो उनको लागि धन्यबाद हो कि मैले आफ्नै योग अभ्यासको विकास गरें र मेरो जीवनमा योगलाई बिभिन्न बिन्दुहरू पनि सिकाएको छु। अर्को उपहार जुन म मन पराउँछु: उनको कथा। उनको पत्रहरू, पहिले हस्तलिखित र ईमेल द्वारा वितरित हालसालैका वर्षहरूमा, केवल सबै भन्दा राम्रो हो।
$$ पाठ: मेरो हजुरआमाले मलाई बचत र मितव्ययीताको महत्व सिकाउनुभयो। उनीलाई थाहा छ। यो उनको रुपैया चिम्टन र घर बनाउने काम थियो जसले आफ्ना बच्चाहरू र नातिनातिनाहरूका लागि अवसरहरू सुनिश्चित गर्‍यो। उनले मलाई मेरा दुई खुट्टामा आर्थिक रूपमा खडा हुन सक्षम हुनुको महत्त्वको मूल्यांकन बुझाइन्।
– मोहन, कार्यक्रम र सage्लग्नताको निर्देशक
मेरो 엄마 / umma मेरो #1 bae हो।
यंग कि, उर्फ Que (क्वीन्स, NY)
उनी आफ्नै प्रकारको "बाघ आमा।" उनले कहिल्यै मेरो भाइ र मलाई सिधा A को प्राप्त गर्न दबाव दिएनन् बरु हाम्रो चाहनाहरू पत्ता लगाउन र पछ्याउन। उनी एक कडा सपना देखिरहेकी छिन् जसले एनवाईसीमा आउँछिन् कि उनलाई के हुँदैछ। मैले पक्कै पनि त्यो आदर्शवाद र विद्रोही आत्मा पाएको छु। मैले खानाको लागि उनको माया पनि विरासतमा पाइन। हुर्कदै, हामी जहिले पनि कोरियाली वा अंग्रेजीमा राम्रोसँग कुराकानी गर्न सक्षम भएनौं। मैले सिकें कि किम्चीको तीक्ष्ण टोकोको शाब्दिक अर्थ "म तिमीलाई माया गर्छु।"
$$ पाठ: मेरी आमाले मलाई जोखिम लिनको महत्त्व सिकाउनुभयो। उनले कहिल्यै पैसालाई अन्तिम लक्ष्यको रूपमा देखिनन् तर सँधै केहि बढीको साधनको रूपमा देखिन। उनी एक हुन् जसले मेरो बुबालाई मेरो किरानेको व्यवसायको स्वामित्वमा धकेले, हाम्रो पहिलो घर खरीद गरे, र मेरो भाइको र कलेज शिक्षामा लगानी गरे। उनको वित्तीय दर्शन मार्गदर्शन र मलाई प्रेरणा।
– JAY, व्यक्ति, रमाईलो र संस्कृति समन्वयक
उनी आनन्द, न्यानोपन, र माया माग्छिन्।
निल्सा, उर्फ "मामा" (मिसन जिल्ला, SF)
मेरी आमा मलाई चिन्नुहुने सब भन्दा शक्तिशाली महिला हुनुहुन्छ। म उसलाई हेर्छु, र म जे पनि गर्छु सबै उनको गर्व गर्नको लागि हो। म धेरै भाग्यशाली छु र सम्मान गर्दछु कि उनी एक महिला हुन् जसले मलाई हुर्काई म आज को हुँ। उनले मलाई वर्षौंदेखि धेरै उपहारहरू दिइन्: उत्कृष्ट आलिंगन, बुद्धिमान र अनुकम्पापूर्ण सल्लाह, र संगीत र साल्सा नृत्यको लागि एक प्रेम।
$$ पाठ: मेरी आमाले मलाई धेरै महत्वपूर्ण वित्तीय पाठहरू सिकाउनुभएको छ जसले मलाई पैसा र मुटुको पीडा बचत गरेको छ, र म निश्चित छु कि यो तिनीहरूलाई मेरा आफ्नै बच्चाहरूमा दिनुहोस्। र ती पाठहरू केवल पैसा भन्दा बढी थिएन। तिनीहरू जीवनको बारेमा छन्: लगातार बचत गर्नुहोस् र बुद्धिमानीपूर्वक तपाईंको पैसा प्रबन्ध गर्नुहोस्, तपाईंसँग जति छ वा जे भए पनि फरक पर्दैन। तपाईंको बिलहरू तिर्नेमा ध्यान दिनुहोस् र समयमा भाँडामा लिनुहोस्; पछि चाहेको बारेमा चिन्ता।
– डोरिस, ग्राहक सफलता प्रबन्धक
उनी मेरो “पाँच ताराहरू” मध्ये एक हुन्, मेरो जीवनमा पाँच प्रभावशाली महिलाहरू।
सुलोचनक, उर्फ हजुरमुमा (काठमाडौं, नेपाल)
हजुरमुमा नेपालीमा हजुरआमाको लागि आधिकारिक पद हो - हाजुर मतलब "सम्मान संग" र आमा मतलब "आमा" र मेरो हजुरआमा आदरको हरेक औंस योग्य छन्। म उनको शक्ति, अनुग्रह, र सौन्दर्यलाई गहिरो प्रशंसा गर्दछु। उनले मलाई धेरै महत्त्वपूर्ण पाठहरू सिकाइन् जसले मलाई आजको मानिस भएको छ। उनको सल्लाहको सब भन्दा राम्रो टुक्रा? त्यो कुनै फरक पार्दैन जीवनमा के हुन्छ, तपाईं सधैं नृत्य याद गर्नु पर्छ। यसले तपाईंको आत्मालाई जीवित राख्छ।
$$ पाठ: मेरी हजुरआमाको जीवन उनले मलाई सिकाएको पाठहरूको उदाहरण हो: कडा मेहनत गर्नु, राम्रो शिक्षा लिनु र आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुको महत्त्व। एक जवान विधवाको रूपमा, मेरो हजुरआमाले नेपालमा आफ्नो समुदायमा सफलतापूर्वक एक व्यवसाय चलाउन सफल गर्नुभयो। ती दिनहरूमा, एक महिलाको लागि यो अनसुना थियो। म उनको बहादुरी र स्वतन्त्रताबाट धेरै प्रभावित छु! उनले मलाई मेरो पहिलो पिग्गी बैंक पनि किनेकी थिइन र मलाई मेरो पहिलो पाठ वित्तमा सिकाई: "बचत गर्नुहोस्, बचत गर्नुहोस्, बचत गर्नुहोस्।" त्यो पाठ मैले आज सम्म अभ्यास गरें, र वित्त मेरो जीवनको काम बनेको छ।
– सुष्मिना, लेखा विशेषज्ञ
कोहीले पनि स्पेयर पसल र शतावरी बनाउन सक्दैन जस्तो उनीले…
चौ फung्ग, उर्फ "आमा" (सान फ्रान्सिस्को, CA)
त्यहाँ म मेरो आमाको बारेमा धेरै चीजहरू प्रेम गर्दछु ... तर दिमागमा आएको पहिलो चीजहरू मध्ये एक उनको खाना पकाउनु हो! उनी धेरै प्रतिभाशाली कुक र बेकर हुन्। र उनले ती सीपहरू र उनको उत्कटता मसँग साझेदारी गरिन्!
$$ पाठ: ठीक छ, मँ एमएएफमा वित्तीय सेवा सहयोगी हुँ भन्ने कुरा विचार गर्दा तपाई सायद अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि मेरोलागि वित्त मेरोलागि महत्वपूर्ण छ। र ती सबै मेरी आमालाई धन्यवाद छ। म धेरै सानो छँदा देखि, मेरी आमा सधैं मलाई महत्वपूर्ण वित्तीय सीप सिकाउन एक मुद्दा बनाई ताकि म स्वतन्त्र र भविष्य को लागी तयार हुनेछ। उनले मलाई कसरी बजेट बनाउने, यसमा अडिग रहन, र वर्षाको दिनको लागि बचत गर्ने तरिका सिकाउँछिन्। उनी एक समर्पित बचतकर्ता हुन् — चाहे जेसुकै चुनौती आए पनि, उनीसँग जहिले पनि बचत हुन्छ। उनी परिपक्व छिन् उनी भित्र रहनका लागि र बढी खर्च नगर्ने। म उनीबाट यी सीपहरू सिकेकोमा कृतज्ञ छु।
– जेनिफर, वित्तीय सेवा सहयोगी
मेरी आमा सुपरवुमेन अवतार हुनुहुन्छ।
सोनिया, उर्फ "mami" (कुञ्जी बिस्केन, फ्लोरिडा)
उदाहरणका लागि लिनुहोस्: जब हामी बच्चा थियौं उनको दैनिक तालिका। उनी हामी सबैलाई खुवाउँछिन् र ढोका बाहिर, सिनियर होम केयर सेवाहरू प्रबन्ध गर्न काममा जान, छिटो -० माईलको बाइक राइडमा निचोरेर, र आइपडसँगै गाउँदै मजाको खाना पकाउनको दिनको अन्त्य गर्छिन्। उनको उर्जा र उत्साहित मनोवृत्ति उनीबाट विकिरणित हुन्छ। जीवनको उतार चढावहरूको माध्यमबाट, त्यसले हामीलाई सबैलाई राम्रो आत्मामा राख्दछ।
$$ पाठ: म सानो बच्चा हुँदादेखि शुरू गर्दै, मेरी आमाले "प्रोत्साहन" दिन्थे (उम, बल) सीधा बचतमा मेरो जन्मदिन पैसा राख्न। उनले मलाई १ 18 औं जन्मदिनमा मलाई क्रेडिट कार्ड दिए र मलाई क्रेडिट र यो बिस्तारै कसरी निर्माण गर्ने भनेर सिकाउन! त्यो पछाडि पीडादायी थियो, तर म ती पाठहरूको लागि सँधै आभारी छु।
– कार्लोस, पार्टनर सफलता प्रबन्धक